Okwu Ugbu A - --Na Mark Mallett
Ihe na Nwere ike 19, 2022 Nwere ike 19, 2022 by Mark
WE na-eru ọgwụgwụ nke ịkwaga ezinụlọ na ozi anyị gara n'ógbè ọzọ. Ọ bụ nnọọ ihe ọgba aghara… ma m jisiri na-otu anya maka ihe a ngwa ngwa na-ewere ọnọdụ n'ụwa dị ka onwe-họpụtara zuru ụwa ọnụ "elite" mgba ike, ọbụbụeze, onunu na nri si n'ụwa bi site arụpụtara ọdụdọ.
Nna Ụka ​​Lactantius kpọrọ ya “otu izu ohi”. Nke a bụ nchikota ihe akụkọ akụkọ niile taa na-atụ aka: Oke ohi na njedebe nke afọ a - Neo-Communist weghara n'okpuru nkwado nke "environmentalism" na "ahụike". N'ezie, ndị a bụ ụgha na Setan bụ "nna nke ụgha". E buru amụma ihe a niile n’ihe dị ka narị afọ abụọ na narị asaa gara aga ma mụ na gị dị ndụ ịhụ ya. Mmeri ahụ ga-abụ nke Kraịst mgbe oke mkpagbu a gachara…
Nke mbụ ebipụtara na Julaị 2020…
E DERE ihe karịrị afọ 2700 gara aga, Aịzaịa bụ onye amụma kasịnụ nke Oge Udo na-abịanụ. Ndị Nna Chọọchị Oge Ochie na-ekwukarị ọrụ ya mgbe ọ na-ekwu maka “oge udo” nke na-abịanụ n’elu ụwa — tupu ọgwụgwụ ụwa — ma dịkwa ka Nwanyị Nwanyị anyị nke Fatima buru n’amụma.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Nke a bụ Hour…
Ihe na March 19, 2022 March 22, 2022 by Mark
NA ịdị n'otu nke St. JOSEF,
DI ONYE NA-AMAGHỊ EZIOKWU MARY
SO Ọtụtụ ihe na-eme ngwa ngwa n'ụbọchị ndị a - dịka Onye-nwe kwuru na ọ ga-eme.Olu Ọsọ ọsọ, Shock na Awe N'ezie, ka anyị na-abịaru nso na "Anya nke oké ifufe", ngwa ngwa na ifufe nke mgbanwe na-afụ. Oké Ifufe mmadụ mere na-aga n'ụzọ na-adịghị asọpụrụ Chineke ruo "ujo na ụjọ"mmadụ n'ime ebe a na-edo onwe ya n'okpuru - niile" maka ọdịmma ọha", n'ezie, n'okpuru nomenclature nke "Great nrụpụta" iji" wughachi azụ mma." Ndị messianists na-akwado utopia ọhụrụ a na-amalite iwepụta ngwa ọrụ niile maka mgbanwe ha - agha, ọgba aghara akụ na ụba, ụnwụ nri, na ọrịa. Ọ na-abịakwasị ọtụtụ ndị “dị ka onye ohi n’abalị”.1 Thess 5: 12 Okwu a na-arụ ọrụ bụ “onye ohi”, nke dị n'obi nke ngagharị ọchịchị ọchịchị ọhụrụ a (lee Amụma Aịsaịa banyere Kọmunist zuru ụwa ọnụ).
Ma ihe a nile ga-abụ ihe kpatara nwoke ahụ na-enweghị okwukwe ịma jijiji. Dị ka Jọn Jọn nụrụ n’ọhụụ 2000 afọ gara aga banyere ndị oge awa nke a na-asị:
Ònye pụrụ iji tụnyere anụ ọhịa ahụ, ma ọ bụ ònye pụrụ ibuso ya agha? (Mkpu. 13:4)
Mana maka ndị ahụ nwere okwukwe na Jizọs, ha ga-ahụ ọrụ ebube nke inye Chineke n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Olu Ọsọ ọsọ, Shock na Awe
5	n'akpa uwe